AccuWeather: Daily Forecast & Live Weather Reports 5.5.0-free Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.5.0-free လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Application မ်ား ရာသီဥတု AccuWeather: Daily Forecast & Live Weather Reports
AccuWeather: Daily Forecast & Live Weather Reports ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Get the summer forecast straight from AccuWeather! Find out whether or not it’s beach weather, the current temperature, what the weather is near you, and other relevant weather news - all with minute-by-minute local weather alerts.
SUMMER WEATHER FORECAST, LOCAL TEMPERATURE UPDATES & WEATHER MAPS: TOP3ACCUWEATHER FEATURES
ဖြောင့် AccuWeather ကနေနွေရာသီခန့်မှန်းချက်ရယူပါ! မိနစ်-by-မိနစ်ဒေသခံမိုးလေဝသသတိပေးချက်များနှင့်အတူအားလုံး - ကကမ်းခြေရာသီဥတု, လက်ရှိအပူချိန်, ဘာရာသီဥတုကသငျသညျလုနီးသည်နှင့်အခြားသက်ဆိုင်ရာမိုးလေဝသသတင်းင်ဖြစ်စေမထုတ်ရှာပါ။
Accuweather ရဲ့နွေရာသီခန့်မှန်းချက်, ရာသီဥတုမြေပုံများနှင့်သင်သည်မည်သည့်တနင်္ဂနွေရာသီဥတုအဘို့အစီစဉ်လက်ရှိရာသီဥတုသတင်းကိုအကူအညီတောင်း။ အဆိုပါခန့်မှန်းချက်ဖြစ်လတံ့သောအရာကိုလေ့လာပါ။ နေ့စဉ်ခန့်မှန်းချက်နေရောင်သို့မဟုတ်နွေရာသီမိုဃ်းကိုရွာစေညွှန်ပြခြင်းရှိမရှိသို့မဟုတ်မထုတ်ရှာပါ။ လက်ရှိအပူချိန်နှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့်ဒေသခံရာသီဥတုအစီရင်ခံစာများနှင့်အတူအပူလှိုင်းအဘို့အစီအစဉ်။ မှောင်မိုက်ကောင်းကင်ပြာဒါမှမဟုတ်နွေရာသီမိုးရွာရွာအကြောင်းကိုစိုးရိမ်နေပါသလား သင်သွားလေရာရာ၌တိကျမှန်ကန်သောရာသီဥတုရေဒါမြေပုံနှင့်အတူတိုက်ရိုက်ရာသီဥတုသတိပေးချက်များကိုရယူပါ။
သွားလာရင်းရာသီဥတုများအတွက်လက်ရှိခန့်မှန်းချက်များနှင့်နေ့စဉ်ရာသီဥတု updates များကိုယနေ့နက်ဖြန်သို့မဟုတ်လာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်းရယူပါ!
နွေရာသီရာသီဥတုအခြေအနေခန့်မှန်းချက်ဒေသခံသည် TEMPERATURE UPDATE & မိုးလေဝသ Maps: TOP3ACCUWEATHER အင်္ဂါရပ်များ
ဒေသခံမိုးလေဝသရေဒါမြေပုံနှင့်အတူလက်ရှိအပူချိန်များအတွက် 1. နေ့စဉ်မိုးလေဝသမွမ်းမံမှုများ: MinuteCast®နှင့်အတူလာမည့်နှစ်နာရီများအတွက်တိကျမှု, မိနစ်-by-မိနစ်ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်အရ။
2. AccuWeather ရဲ့တိုက်ရိုက်ရာသီဥတုအစီရင်ခံစာများသင်ကမိုးရွာရွာ, နေရောင်သို့မဟုတ်ကမ်းခြေရာသီဥတုဖြစ်လိမ့်မယ်ဖြစ်စေမများအတွက်ဒေသခံအပူချိန်နှင့်နေ့စဉ်ခန့်မှန်းချက်ပေးပါ။ သင်သွားလေရာရာ၌တနင်္ဂနွေရာသီဥတု updates များကိုရယူလိုက်ပါ။
3. အပူလှိုင်း Beat! လက်ရှိအပူချိန်ကိုမကြာခဏနေ့စဉ်ခန့်မှန်းချက်ထက်ပူနွေးခံစားရပါတယ်။ အဆိုပါ RealFeel Temperature®ရာသီဥတုယနေ့အမှန်တကယ်ပြင်ပမှာခံစားရသင်မည်သို့ပြသထားတယ်။
သင့်ရဲ့လက်ရှိခန့်မှန်းချက်များနှင့်တိုက်ရိုက်ရာသီဥတုမြေပုံကိုယ်ပိုင်နိုင်ပါသည်။ AccuWeather နှင့်အတူကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်ဒေသဆိုင်ရာရာသီဥတုသတင်းကိုရယူပါ:
•နေ့စဉ်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်: သင်၏ပင်မမျက်နှာပြင်ကနေဒေသခံရာသီဥတုသတင်းများ, အပူလှိုင်းနောက်ဆုံးသတင်းများ, ရေဒါမြေပုံများနှင့်ဒေသခံရာသီဥတုအစီရင်ခံစာများအရ။
•သင့်ကို Global နှင့်ဒေသခံခန့်မှန်းချက်အကျဉ်းချုပ်နှင့်အတူဒေသခံရာသီဥတုယနေ့မနက်ဖြန်နှင့်နောက်လာမည့်နှစ်ပတ်အတွင်းအဘို့အခြေရာခံ။ မိုးရွာရွာသတိပေးချက်များအတွက်တနင်္ဂနွေရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်စစ်ဆေးပါ။ ဒါကြောင့်တစ်နေ့ပြီးပြည့်စုံသောကမ်းခြေရာသီဥတုနေရောင်သို့မဟုတ်တစ်တွေများမှောင်မိုက်ကောင်းကင်ပြာရဲ့ရှိမရှိကိုပြင်ဆင်ရမည်။
•ဒေသခံမိုးလေဝသသတိပေးချက်များကိုရယူပါနှင့်ခန့်မှန်းချက်ကတော့ AccuWeather အသင်းထံမှသောအရာကိုရှာဖွေ!
•AccUcast®နှင့်အတူနေ့စဉ်ခန့်မှန်းချက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု Be နှင့်ရပ်ရွာနှင့်သင်၏နွေရာသီရာသီဥတုသတင်းကိုမျှဝေပါ။
•အပြည့်အဝ Android Wear ™ထောက်ခံမှုခံစားကြည့်ပါ: ဖြောင့်သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်MinuteCast®, RealFeel Temperature®, ရာသီဥတုရေဒါမြေပုံများ, လက်ရှိခန့်မှန်းချက်နှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့်ပြင်းထန်သောရာသီဥတုသတိပေးချက်အရ။
AccuWeather: Daily Forecast & Live Weather Reports အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
AccuWeather: Daily Forecast & Live Weather Reports အား အခ်က္ျပပါ
kandinsky စတိုး 974 236.39k
AccuWeather: Daily Forecast & Live Weather Reports ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း AccuWeather: Daily Forecast & Live Weather Reports အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.5.0-free
App Name: AccuWeather: Daily Forecast & Live Weather Reports
Release date: 2018-09-01 01:17:09
AccuWeather: Daily Forecast & Live Weather Reports APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ